Home Wararka Gudaha Haddaba tallaabo noocee ah ayuu madaxweyne Xasan Sheekh qaadi doonaa?
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si dhow uga hadli jiray isbeddellada iyo dhacdooyinka siyaasadda ee ay ku lugta lahayd dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa jira waxyaabo uu dowladda ku dhaliilay, isla markaana uu ballan-qaaday inuu wax ka beddeli doono haddii dib loo doorto.
Arrimaha qaar ayuu wareysiyo hore loola yeeshay ku sheegay intii uu ahaa murashaxa madaxweynaha in ay mudnaanta koowaad u yeelan doonaan xafiiskiisa.
Haddaba waxaan halkan idinkula wadaagaynaa arrimahaas.
Dhallinyaro tababar ciidan loo geeyay Eritrea
Waxyaabaha uu ballan-qaaday madaxweyne Xasan Sheekh intii aan la dooran waxaa ku jira arrinta dhallinyarada la sheegay in tababar ciidan loo geeyay dalka Eritrea. Dowladdii hore wuxuu ku dhaliilay qaabka ay u maamushay kiiska dhallinyaradaas.
Wuxuu ku tilmaamay arrin ka mid ah caqabadaha ay dowladdii hore uga tagtay dowladda ka dambeysa. Arrintaas wuxuu u cuskaday in dhallinyaradaas aysan lahayn raad la tixraaco.
Hase yeeshee, wuxuu ballan-qaaday in arrinta dhallinyaradaas ay noqon doonto howlaha muhiimadda koowaad u leh maalinta uu xafiiska tago.
Waxyaabaha uu ballan-qaaday waxaa ka mid ah in warbixin toddobaadle ama bille ah oo dhallinyradaas ku saabsan uu siin doono dadka Soomaaliyeed iyo waalidkood
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xilligaas nasiib-darro ku tilmaamay in warka ku saabsan dhallinyaraas laga ogaado hay’ado caalami ah iyo dalal shisheeye, beddelkii ay dowladda Soomaaliya waaliddiinta u faahfaahin lahayd sida ay wax u jiraan.
Wuxuu dhaliilay warar is-khilaafsan oo ka soo baxay qaabka dhallinyaradaas loo diiwaangeliyay uu lahaa billow iyo hab-raac qaldan.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrinta ciidanka tababarka loo geeyay dalka Eritrea markii uu xilka ku wareejinayay Xasan Sheekh Maxamuud.
Wuxuu sheegay in ciidankaas oo tiradooda ay gaarayso 5,000 oo askari ay isugu jiraan qeybaha ciidanka. Wuxuu xusay in ay tababarka dhameysteen bartamihii sanadkii 2021. “Iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay in ay isa saameyso,” ayuu yiri Farmaajo.
“Mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaan rajaynayaa ciidankaas in ay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan argagixisada Al-Shabaab.”
Haddaba warbixinta uu Xasan Sheekh ballan-qaaday ma intaas ayay ku eg tahay mise waaliddiinta wuxuu siin doonaa xog faahfaahsan oo dhameystiran?
Xarigga Mukhtaar Roobow
Xarigga Mukhtaar Roobow Cali oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab balse la xiray xilli uu u sharraxnaa xilka madaxweynaha Koonfur-galbeed ayaa ka mid ah waxyaabaha uu sida aadka ah uga hadlay Xasan Sheekh muddadii uu bannaanka ka joogay dowladda.
Wuxuu xarigga Roobow ku tilmaamay mid sharci-darro ah iyo afduub uu cuskiyay sababo siyaasadeed. Wuxuu meesha ka saaray in xariggaas uu la xiriiro arrimo amni ama Al-Shabaab
Wuxuu sheegay in Roobow uu dowladda isu soo dhiibay oo ay aqbashay oo baasaboor la siiyay, safarro dibadda ahna uu aaday. Markii uu isu soo taagay xilka madaxweynaha Koonfur-galbeed lagama hor istaagin, laakiin markii ay doorashada soo dhoweyd ayaa la xiray iyadoo aysan maxkamad amrin, maxkamadna aan la geyn, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha.
Nolosha Mukhtaar Roobow oo “walaac laga muujiyay” ka dib khilaafka NISA
“Waxay dowladdu albaabka ka soo oodday in hoggaamiyeyaal dambe ay Shabaab ka yimaadaan [iska soo dhiibaan],” ayuu yiri Xasan Sheekh mar uu ka hadlayay kiiska Mukhtaar Roobow.
Wuxuu raaciyay “qalad weyn ayuu ahaa kiiska Mukhtaar Roobow.”
Wuxuu sheegay in uusan garan karin sabab uu Mukhtaar ugu sii xirnaan karo dowladda. “In la soo daayo ayuu mudan yahay, haddii la soo daayana uu xuquuqdiisa u dacwoodo. Dadkii ku xadgubayna in sharciga la hor keeno ayay mudan yihiin,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Ilaa hadda ma jirto tallaabo shaacsan ama la ogyahay oo ay dowladda qaadday, inkastoo aan weli la dhisin xukuumad cusub.
Previous articleUgu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax bambaano oo ka dhacay gobolka
Next articleKenya oo ku tumatay Qaranimaddii Somalia.
Culimada Somaliland ayaa bayaan ka sooo saaray khilaafka Siyaasadeed ee ka...
Labada Dhalinyarada ah ayaa durba saameyntooda waxaa laga dareemay Golaha Shacabka...
Xaalado daran oo soo wajahay Shacabka degaannadii ay ku dagaalameen Soomaalida...